New Jersey WIC | JPMA, Inc.
Haddii adiga ama qof aad taqaanid ay ka faa'iideysan karaan adeegyada WIC, fadlan la xiriir kiliniga kuugu dhow. Waxaad ka heli kartaa rugta caafimaad ee ugu dhow ee app!
Hoos ka eeg si aad u hesho hagaha cuntada WIC-u-qalma!
Adiga oo isticmaalaya jeegaga WIC
New Jersey WIC waxay ka caawisaa qoysaska inay lacag ku badbaadiyaan oo ay u kala bixiyaan miisaaniyadooda cuntada seddex siyood.
Xirmada Cuntada Aasaasiga ah
Kaqeybgaleyaasha New Jersey WIC waxay helayaan foojarro bille ah oo loo adeegsan karo in kabadan 900 dukaamada New Jersey si loogu iibsado caano, jiis, ukumo, badarka, rootiga qamadiga, iyo cuntooyinka kale ee caafimaadka qaba ee ka muuqda daabacaadda 2020 ee Liiska Cuntada La Ansixiyay
Lacagta Lacagta Lacageed
Kaqeybgalayaasha New Jersey WIC waxay isticmaali karaan Kaashka Qiimaha Lacagta (mararka qaar loo soo gaabiyo "CVV" ama loogu yeero "foojarro" ganacsiyada tafaariiqda) si ay uga iibsadaan miraha iyo khudradda darayga ah, qasacadaysan ama la qaboojiyey ee dukaamada iyo suuqyada beeraleyda, sanadka oo dhan.
Hooyooyinku waxay ku heli karaan $ 11 bishiiba Foojarrada Lacagta Kaashka ah. Carruurta da'doodu u dhexeyso 2-4 waxay ku heli karaan $ 9 bishiiba Foojarrada Qiimaha Lacagta.
CVV - Ingiriis
CVV - Isbaanish
Barnaamijka Nafaqada Beeraha Beeraleyda
Laga bilaabo Juun ilaa Noofambar, kaqeybgalayaasha WIC waxay isticmaali karaan Jeegaga Suuqa Beeraleyda si ay ugu iibsadaan miraha iyo khudradda darayga ah ee maxalliga ah suuqyada beeraleyda uqalma. Jeegaga Suuqa Beeraleyda WIC looma isticmaali karo dukaamada cuntada ama dukaamada kale.
Hooyooyinka iyo carruurta da'doodu tahay 2-4 waxay heli karaan $ 25 bishii Jeegagga Suuqa Beeraleyda.
Waxtarka iyo Adeegyada WIC
WIC waxay hubisaa cuntada nafaqada leh
Waxbarashada nafaqada iyo la talinta
Waxbarashada naasnuujinta iyo taageerada
Baaritaanka tallaalka iyo gudbinta
U gudbinta daryeelka caafimaad ee qiimaha jaban ama jaban
U gudbinta adeegyada caafimaadka ama bulshada